Wararkii ugu dambeeyay Dil khaarijin ah oo ka dhacay Magaalada Kismaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wararka aan ka heleyno Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in gelinkii dambe ee Maanta halkaas lagu dilay mid kamid ah Darawalada shaqeeya Magaaladaas.
Goobjoogayaal ayaa ku warramay in Askari ka tirsan Ciidanka Maamulka Jubbaland uu dilay Ninka darawalka ahaa, xili uu ku sugnaa argada Kismaayo, isagoo u geeriyooday xabado looga dhuftay qeybaha sare ee jirka.
Dilka loo geystay darawalka ayaa ka dambeeyay, kadib markii Ninka iyo Askariga uu muran kooban soo kala dhexgalay kadibna uu carooday Askariga, sidaasina uu ku dilay, waxaana goobta laga qaaday Meydka.
Allaha u naxariistee Marxuumka ayaa lagu magacaabi jiray Cabdikaafi Xasan Cabdulle, isla markaana waxaa uu kamid ahaa darawalada ku shaqeysata gaadiidka taksiga, waxaana baxsaday Askarigii falka geystay.
Magaalada Kismaayo ee Caasimadda KMG ah ee Maamulka Jubbaland ayaa waxaa horey uga dhacay dilal qorsheysan iyo weeraro, waxaana sidoo halkaas Askar ka tirsan Maamulka ay ugu dileen dad shacab ah.